"Otu esi ere na Amazon USA", akwụkwọ ọcha ọhụrụ si SaleSupply | ECommerce ozi ọma
"Otu esi ere na Amazon USA", akwụkwọ ọcha ọhụrụ si SaleSupply
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, eCommerce, Marketing
- Nkwado, Onye na-eweta ọrụ e-commerce zuru ụwa ọnụ, amalitela akwụkwọ ọcha nke ọ na-ekerịta ihe kpatara ire ere na Amazon USA bụ ụzọ dị mma iji banye n'ahịa ịntanetị na USA.
N'ihe banyere iche echiche banyere mba ụwa nke azụmaahịa dị n'ịntanetị, ọ bụghị mmadụ niile na-eche ozugbo na US, ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-ahọrọ ịmalite usoro mgbasawanye na Europe. Agbanyeghị, ka ha na-agbachitere SaleSuply, "Anyị nọ n'oge ọ bara uru ịtụle ịnye ndị ahịa America ụdị ngwaahịa ya."
Ahịa eCommerce nke US nwere ntụgharị kwa afọ nke ihe karịrị nde dollar 456.000 ma nwee ndị na-azụ ihe n'ịntanetị dị nde 196. Ọ bụkwa ahịa dị n'ụlọ ọtụtụ ụlọ ọrụ e-commerce na-aga nke ọma, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị amasị ụwa na-aga ahịa. Tụkwasị na nke ahụ, United States bụ etiti nke ihe ọhụrụ, ọganihu dijitalụ, na teknụzụ.
Ọ dị ka ahịa a na-apụghị imeri emeri, mana ọ bụghị. N'ezie, enwere ọtụtụ ihe kpatara ya, ọ bụrụ na ị na-ere n'onlinentanet, Amazon.com kwesịrị ịmasị gị. Nke a bụ ihe ha chọrọ site na SaleSuply.
Ihe 6 kpatara ire na Amazon USA
# 1 - Ọ bụrụ na ịnweghị ike imeri ha, sonyere ha
Amazon na-enwetawanye ahịa ahịa. Ọ bụrụla ebe a na - echekwa otu ebe, na - enye ihe niile ebe ọ bụla.
Na mbu, ahuru Amazon dika ihe iyi egwu nye ndi obere ahia, mana SaleSuply choro ile Amazon anya, karisia ahia nke ato ya, dika ohere iji ezigbo ngwa ahia Amazon. “Ọ dị ka ịnyịnya ebili nke e-azụmahịa uto na ya Ruth. Na a nnukwu, tozuru okè ahịa dị ka US, nke a nwere ike ịbụ a nnukwu akpan owo ka ị na iba iba gị ahịa ntinye njem.
# 2 - Bụrụ akụkụ nke ebe mbụ ndị na-azụ ihe n'ịntanetị
Amazon na-ejide nnukwu akụkụ nke okporo ụzọ metụtara eCommerce, nke mbụ, n'ihi na ọtụtụ ndị ahịa na-amalite nyocha ha maka ngwaahịa na ikpo okwu Amazon.com, na-ahapụ Google dịka nhọrọ nke abụọ.
# 3 - Ulo ahia nke United States n'ahịa nwere oke nsogbu ahia
Na-ere site n'ọma ahịa Amazon na-enyere gị aka iji nkà na ụzụ Amazon, ngwá ọrụ ahịa, na mbupu na ọrụ mmezu. Ya mere, ọ dịghị mkpa itinye nnukwu ego a ogologo oge iji chọpụta ahịa ọhụrụ a na-akpali akpali.
# 4 - ọ bụ oge
Euro na-enwe nrụgide site na ejighị n'aka akụ na ụba n'ihi nsogbu ụgwọ EU. Otu ego ugbu a dị ala karịa dollar US, nke bụ ọnọdụ dị mma maka ire ngwaahịa ndị Europe na US Uru asọmpi a dị mma maka ịkwado akara ahụ na inweta traction na ahịa ọhụrụ.
# 5 - Mụta ihe kacha mma
Amazon bụ ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa na ntinye ego sitere na eCommerce. Nchịkọta 10 kachasị elu nke ụlọ ọrụ nyocha Ystats bipụtara na 2014, gosipụtara na Amazon na 2013 wetara Amazon $ 74 iresị nke ngwaahịa na ọrụ, nke ka mma karịa nchikota ego nke ụlọ ọrụ itoolu ndị ọzọ, dị ka JD.com , Alibaba, Walmart, eBay. Otto Group, Cnova (Casino), Tesco, Rakuten na Best Buy, ọnụ.
# 6 - Were uru dị ukwuu nke ahịa US
Na-ere n'ahịa Amazon na-enye ohere ịtọ ntọala dị mfe na ihe egwu dị ala, mana n'otu oge ahụ mepee ụzọ maka nnukwu ahịa eCommerce, yana ndị na-ege ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 200 ndị na-azụ ahịa.
Gbasawanye azụmahịa na United States pụtara ịsọ mpi na gburugburu ọnụahịa siri ike, yana atụmanya ndị ahịa dị elu na ụkpụrụ azụmaahịa dị elu. Agbanyeghị, ikike dị ukwuu, ebe ọ bụ na mmadụ na-emefu na eCommerce kwa mmadụ n'otu afọ bụ, na nkezi, dollar 2.216 (karịa euro 1.900). Nkezi a dị elu karịa nke Europe, nke dị na euro 1.376.
Nwere ike ibudata akwụkwọ ọcha ahụ n'efu Otu esi ere na Amazon USA ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » "Otu esi ere na Amazon USA", akwụkwọ ọcha ọhụrụ si SaleSupply
Igodo nke azụmahịa azụmahịa nke mpaghara ndị njem, dị ka eDreams
Shoppingzụ ahịa n'ịntanetị? Dịka onye na-azụ ahịa ị ga-amarịrị ikike gị